3 Zvino Joshua akafumomuka, iye nevanakomana vose vaIsraeri vakatama paShitimu+ vakasvika pedyo naJodhani; vakarara ipapo vasati vayambuka. 2 Naizvozvo kwapera mazuva matatu+ vatungamiriri+ vakapfuura nepakati pomusasa, 3 vakarayira vanhu, vachiti: “Pamunongoona areka yesungano yaJehovha Mwari wenyu, uye vapristi, vaRevhi, vakaitakura,+ ibvai matama munzvimbo yenyu, muitevere, 4 —asi ngapave nechinhambwe chakayerwa+ chemakubhiti anenge zviuru zviviri pakati penyu nayo; musaswedera pedyo nayo—kuti muzive nzira yamuchaenda nayo, nokuti hamuna kumbofamba nenzira iyoyo.” 5 Zvino Joshua akati kuvanhu: “Zvitsvenesei,+ nokuti mangwana Jehovha achaita zvinhu zvinoshamisa+ pakati penyu.” 6 Joshua akabva ati kuvapristi: “Simudzai areka yesungano+ mutungamirire vanhu.” Naizvozvo vakasimudza areka yesungano vakatungamirira vanhu. 7 Zvino Jehovha akati kuna Joshua: “Nhasi ndichatanga kukukudza pamberi pevaIsraeri vose,+ kuti vazive kuti ini zvandakava naMosesi+ ndichavawo newe.+ 8 Uye iwe—urayire+ vapristi vari kutakura areka yesungano, uchiti, ‘Pamunongosvika pamucheto pemvura yaJodhani, mumire+ muJodhani.’” 9 Zvino Joshua akati kuvanakomana vaIsraeri: “Swederai kuno muteerere mashoko aJehovha Mwari wenyu.” 10 Pashure Joshua akati: “Muchaziva kuti Mwari mupenyu ari pakati penyu+ neizvi, uye kuti chokwadi achadzinga vaKenani nevaHiti nevaHivhi nevaPerizi nevaGigashi nevaAmori nevaJebhusi pamberi penyu.+ 11 Tarirai! Areka yesungano yaShe wenyika yose iri kukutungamirirai ichipinda muJodhani. 12 Zvino torai varume gumi nevaviri pamadzinza aIsraeri, murume mumwe chete padzinza rimwe nerimwe.+ 13 Tsoka dzevapristi vakatakura areka yaJehovha, Ishe wenyika yose, padzinongotsika mumvura yaJodhani, mvura yaJodhani ichaganhuka, iyo mvura inodzika ichibva kumusoro, uye ichamira sedziva rimwe.”+ 14 Vanhu pavakatama pamatende avo nguva pfupi vasati vayambuka Jodhani, vapristi pavakanga vakatakura areka+ yesungano vachitungamirira vanhu, 15 uye pakangosvika vakanga vakatakura Areka paJodhani, uye tsoka dzevapristi vakanga vakatakura Areka dzanyura nechokumucheto kwemvura (zvino rwizi rwaJodhani runofashukira mahombekombe arwo ose+ mazuva ose okukohwa), 16 mvura yaidzika ichibva kumusoro yakabva yatanga kumira. Yakaungana sedziva rimwe+ kusvikira kure kwazvo kuAdhamu, guta riri kurutivi rweZaretani,+ iya yaidzika yakananga kugungwa reArabha, Gungwa roMunyu,+ ikapwa. Yakaganhuka, vanhu vakayambuka nepakatarisana neJeriko. 17 Munguva iyi vapristi vakanga vakatakura areka yesungano yaJehovha vakaramba vakamira vasingatsuduguki vari panyika yakaoma+ pakati paJodhani vaIsraeri vose pavakanga vachiyambuka panyika yakaoma,+ kusvikira rudzi rwose rwapedza kuyambuka Jodhani.